အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအတွက် Swing Trade လုပ်နည်းကို လေ့လာပါ။ -2ကုန်သွယ်မှု ဇွန်လ 2022 ကို လေ့လာပါ။
Swing Trading တွင်ကုန်သွယ်မှု ၂ ဝဝ ၂ လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
လက်လွှဲကုန်သွယ်မှုသည်လက်လီကုန်သည်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပို၍ ထင်ရှားလာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်နေ့တာကုန်သွယ်ရေးနဲ့မတူဘဲတကယ့်အကျိုးအမြတ်ပြန်ရဖို့လုံလောက်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေးနေချိန်မှာသူကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုပေးတယ်။
လွှဲကုန်သွယ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုများသည်တစ်ရက်ထက် ပို၍ ကြာအောင်ပွင့်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်သောမဟာဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရာထူးရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ပင်ရက်သတ္တပတ်အဘို့အဖွင့်ထားရှိမည်နိုင်ပါသည်။ ရှားရှားပါးပါးကိစ္စရပ်များတွင်ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ်အစွန်းသာကျန်ရှိပါက ၂-၃ လအထိကြာအောင်ဖွင့်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လွှဲကုန်သွယ်ရေးတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုသည်ရေတိုတွင်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိရန်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ရက်ထက် ပို၍ ကြာမြင့်သည်။
အခြေခံအယူအဆမှာကုန်သည်များကယုံကြည်မှုရှိသည့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက်စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိရန်ပိုင်ဆိုင်မှုအပြောင်းအလဲသည်ရက်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာလိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များစွာကသူတို့ကိုယ်သူတို့ swing traders များဟုယူဆကြသည်ဟုပြောနိုင်သည်။
လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ပြီးသည့်အခါလွှဲကုန်သွယ်မှုသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိ၊ မရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်လိမ့်မည်!
Swing Trading သည်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
Swing ကုန်သည်များသည်စျေးကွက်ရှိပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်“ အပြောင်းအလဲ” သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုမဆိုဖမ်းယူရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ကသင့်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုပယ်ဖျက်မပေးခင်၊ နောက်အပြောင်းအလဲမဖြစ်ခင်ခင်ဗျားရဲ့အမြတ်အစွန်းကိုပိတ်ထားချင်တယ်။
Swing ကုန်သည်များသည် swing တွင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုကြသည်။ သွေဖည်မှုနည်းသောစျေးကွက်များ၌သင်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Swing trading သည် နေ့စဥ်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အချိန်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးနှုန်းများတွင် အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကို သင်ဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ အချက်အလက်များအပေါ်တွင် သင်၏ဗျူဟာများကို အခြေခံနိုင်သည်။
စျေးကွက်သည် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို နောက်ပြန်လှည့်နိုင်ပြီး ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပိုမိုရှည်လျားသောကာလများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများကို သင်သည် လက်လွတ်သွားနိုင်သည်။
Swing Trading သို့ချဉ်းကပ်နည်း
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလွှဲကုန်သည်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအချိန်တိုအတွင်းအမြတ်အစွန်းများရရန်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုဆန့်ကျင်။ သင်သည်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရန်ရည်ရွယ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အမြတ်ငွေ ၅% - ၁၀% သာရလိမ့်မည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်လွှဲကုန်သွယ်မှုကာလသည် ၂ ရက်မှ ၁၀ ရက်အကြားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိသာကြာသည်။ ဒီရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအမြတ်ကြီးကြီးမားမားကို ဦး တည်စေဖို့အသေးအဖွဲလေးတွေကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်။
Swing Trading နှင့် Day Trading အကြားခြားနားချက်
ဤကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုး၏အဓိကခြားနားချက်မှာကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ချိန်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်အရောင်းအဝယ်၌, သင်ပုံမှန်အားဖွင့်သောနေ့၌ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်။ Swing Trading သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီအတွင်းဖွင့်ထားသည့်အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Swing ကုန်သည်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုရာထူးများကိုရံဖန်ရံခါစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအနီးကပ်ခြေရာခံရန်မလိုအပ်ပါ။
နေ့အရောင်းအဝယ်ကိစ္စနှင့်မတူပါ။ နေ့ကုန်သည်များသည်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှဖွင့်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်လွှဲကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်အခြေအနေများသည်တစ်ညလုံးပိုကောင်းရန်သို့မဟုတ်ပိုဆိုးရန်ပြောင်းလဲနိုင်သည့်ပင်မအန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
Swing Trading အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစား
လွှဲကုန်သွယ်မှုတွင်ပထမဆုံးကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်မှာသင်ကုန်သွယ်လိုသောပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ Swing ကုန်သည်များအတွက်မတူညီသောဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများရှိသည်။ တစ်ချက်ကြည့်လျှင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အစုရှယ်ယာများ၊ ငွေကြေး၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် cryptocurrencies ၏စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားပေါ် မူတည်၍ ကုန်သွယ်မှုသို့ဝင်ရန်ငွေမည်မျှရှိသည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ ဒိုမိန်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစတော့ရှယ်ယာလွှဲကုန်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုများမှာသေချာသည်။ ဤရွေ့ကားပုံမှန်အားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီကုမ္ပဏီများ၏ရှယ်ယာဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဤအစုရှယ်ယာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုသည်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုထိခိုက်စေမည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံတွေ့နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်တွင်ထင်ရှားသောဘဏ်တစ်ခု၏အစုရှယ်ယာများတွင်ရှယ်ယာများရှိပါကလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုသတင်းတစ်ခုသည်၎င်း၏ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးကိုချက်ချင်းတွက်ချက်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်သည်တစ် ဦး ချင်းကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သောအခါ၊ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူတို့သည်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာတန်ဖိုးကိုရရှိနိုင်သည်။
ညွှန်းကိန်းများသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ရှယ်ယာများဖြစ်သည်။ ညွှန်းကိန်းများအရောင်းအ ၀ ယ်သည်စျေးကွက်အတက်အကျကိုသာမကကဏ္aတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းအကျိုးရှိစေသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အစုရှယ်ယာများနှင့်ဆင်တူသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပြောင်းလဲမှုသည်အညွှန်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ETFs swing ကုန်သွယ်မှုအတွက် အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုရွေးချယ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားခြားနားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ခင်းကျင်းမှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကဏ္ဍများစွာတွင် ရရှိနိုင်သည်။
ကုန်သည်တစ် ဦး ကရွေးနိုင်သည် ETF သူတို့ကတစ် ဦး အထူးသဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အသိပညာရှိပါကမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအမျိုးအစား၏။ အရောင်းအ ၀ ယ် ETFs သည်မတူကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုအုပ်စုတစ်စုကိုသင်ရောင်းဝယ်ခြင်း မှလွဲ၍ တစ် ဦး ချင်းအစုရှယ်ယာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၏တူညီသောလိုင်းများအတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုသည်လွှဲကုန်သည်များအတွက်အဓိကကျသောကဏ္ sphere ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးရောင်းဝယ်နေစဉ်သင်တစ် ဦး သည်အခြားတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးတစ်ခုတိုးလာခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းကိုတွေ့မြင်ရန်ရှာဖွေနေသည်။ The Forex ဈေးကွက် အလွန်မတည်ငြိမ်သောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အဓိကအားဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိလွှဲကုန်သည်များကကုန်သွယ်သည်။
ကုန်စည်ကုန်သွယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လွှဲကုန်သည်များက ကြိုးပမ်းလေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်၊ သတ္တုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များအဖြစ် အုပ်စုဖွဲ့ထားသည့် ခိုင်မာသော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မတူဘဲကုန်စည်စျေးကွက်များသည်တစ်နေကုန်လည်ပတ်နေပြီးကုန်သွယ်မှုမှာဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုန်သည်များအတွက်အန္တရာယ်များသောအချက်တစ်ချက်နှင့်လာသည်။
cryptocurrencies အရောင်းအ swing ကုန်သည်များအကြားပိုပိုပြီးလူကြိုက်များဖြစ်လာနေသည်။ ဤတွင်အမြတ်ရရန်သင် swing trading တွင်သာမက cryptocurrencies ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုလည်းလိုအပ်သည်။ cryptocurrencies ၏မတည်ငြိမ်မှုလွှဲဘို့အလွန်အမင်းဆွဲဆောင်သည် ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ.
အစပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်အပေါများသည့်ရွေးချယ်မှုများသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်သောဗဟုသုတမရှိလျှင်သင်၏ပထမခြေလှမ်းသည်မည်သည့်စျေးကွက်တွင်အထူးပြုရမည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုထက် ပို၍ ကုန်သွယ်ရန်ကြိုးစားရန်မသင့်ပါ။
Swing ကုန်သည်များသည်၎င်းတို့၏ကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာပေါ် မူတည်၍ သင်ရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများမှသင်အကျိုးရယူနိုင်သည်။ သငျသညျအစစတင်သောအခါ, သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတ ဦး တည်းပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၏ကျော့မိလေ့လာမှုနှင့်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုထင်ကြေး။
သင်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအခြားကဏ္sectorsများတွင်လည်းအရောင်းအဝယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားလိုပေမည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်ပိုမိုအတွေ့အကြုံများလာသောအခါသင်၏ကုန်သွယ်မှု ဦး စားပေးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ရှိလိမ့်မည်။
Swing Trading ၏အခြေခံ
Swing ကုန်သွယ်မှုသည်အခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ရာထူးများ၏အချိန်ဘောင်တွင်ဖြစ်သည်။ လွှဲကုန်သွယ်မှု၌စတင်ရန်သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အချက်များမှာဤတွင်ဖြစ်သည်။
Long က vs. Going က Short Going
သင်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်ဆောင်းပါးကိုမဆိုဖတ်ရှုပါကဤဝေါဟာရများကိုလက်လွတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ ကုန်သွယ်မှု၏အဓိကအပိုင်းတွင်ရာထူးနှစ်ခုရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး သည်ရှည်လျားပြီးတိုတောင်းနိုင်သည်။
ABC အစုရှယ်ယာများ၏ ၀ င်ရောက်စျေးကွက်တန်ဖိုးကိုသင်ခန့်မှန်းပြောဆိုသည်ဆိုပါစို့။
သင် ABC ၏ ရှယ်ယာ 100 တွင် စျေးကွက်နှုန်း $20 ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
ဒီကုန်သွယ်မှု၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး $ 2000 ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ABC ၏ရှယ်ယာတန်ဖိုး ၂.၅% မြင့်တက်ပါကရှယ်ယာများကို $ 2.5 ဖြင့်သင်ရောင်းနိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်အား $ 20.5 ၏ထွက်ပေါက်တန်ဖိုးကိုပေးလိမ့်မည်။
သင်၏အမြတ်အစွန်းမှာဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။ သင်ရှည်စွာသွားရန်ရွေးချယ်ပါကအမြတ်အစွန်းမှာအကန့်အသတ်မရှိမြင့်တက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပိုင်ဆိုင်မှု၏စျေးနှုန်းသည်သင်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းမတိုးခဲ့ပါက၎င်းသည်ကုန်သွယ်မှုအပေါ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့် ABC ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၁၉.၅ သို့ကျသွားပါကဒေါ်လာ ၅၀ အရှုံးဖြင့်ကျန်တော့မည်။ Swing ကုန်သည်တွေကဈေးကွက်မှာဒီလိုကျဆင်းမှုမဖြစ်ခင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းချင်ကြတယ်။
သင်သည် ABC ၏ ရှယ်ယာ 100 ကို ရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် $30 ဖြင့် စုစုပေါင်း $3000 ဖြင့် ရောင်းချရန် အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုဖွင့်ပါသည်။
ABC နှုန်းသည် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း 16.6% ကျဆင်းသွားသည်။
၎င်းသည် ABC ၏ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကို $ 25 သို့ယူဆောင်သည်။
သင်က အမှာစာတစ်ခုတင်ပြီး ရှယ်ယာ 100 ကို $2500 နဲ့ ပြန်ဝယ်ပါ။
ပွဲစားတိုင်းသည် တိုတောင်းသောရောင်းအားဖြင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် တိုက်တွန်းသည်မဟုတ်။ တိုတောင်းသော အရောင်းနည်းဗျူဟာမှ အကျိုးအမြတ်ရယူလိုပါက၊ သင်၏အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားမှာ ကမ်းလှမ်းသော ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ CFDs.
CFDs နှင့်အတူ Swing ကုန်သွယ်
CFDs သို့မဟုတ် Contract-for-Differences နှင့်ကုန်သွယ်နေစဉ်၊ အယူအဆဆိုသည်မှာသင်သည်အခြေခံဘဏ္financialာရေးတူရိယာ (ကုန်စည်တစ်ခု၊ စတော့အိတ်သို့မဟုတ် Forex ဖြစ်စေ) ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုခြေရာခံတဲ့တူရိယာနှင့်အတူကုန်သွယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်သင်၎င်း၏အလားအလာနှင့်ပတ်သက်။ အီရန် (ဝယ်အမိန့်) သို့မဟုတ် bearish (bearish) ခံစားရရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရ။
အရေးကြီးသည်မှာ CFDs များမှတဆင့်ကုန်သွယ်ခြင်းသည်ကုန်သွယ်မှုပြုနေစဉ်တိုတောင်းနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင်မရောင်း ၀ ယ်ပါကသင်သာမန်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်ပါကသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်။
Swing Trading ၏ကာလ
Swing အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကာလတိုရာထူးအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်တိုတောင်းသောကာလအတွင်းကြာချိန်သည်ရက်အနည်းငယ်မှအပတ်အနည်းငယ်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ အခြေခံကျသောမဟာဗျူဟာသည်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှအမြတ်များကိုစုဆောင်းရန်ဖြစ်သည်။
အချို့သောကုန်သည်များကအမြတ်အစွန်းများများရရှိရန်အမြတ်အစွန်းများများရရန်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုငယ်များကိုခွင့်ပြုထားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင် ပို၍ ကြာကြာနေခြင်းကြောင့်သင်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေရန်စျေးနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောအခြားအချက်များကိုလည်းသင်စွန့်စားနိုင်သည်။
Swing Trading သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည် အွန်လိုင်းကုန်သွယ်။ ဒါဟာစျေးနှုန်းမြင့်တက်အဖြစ်မကြာမီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ရိုးရှင်းပုံရသည်။ သို့သော်ခက်ခဲသောအပိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မှန်ကန်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိရိယာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Swing Trading ၏အနုပညာကိုသင်ကြားရန်အချိန်၊ ကတိက ၀ တ်နှင့်စိတ်ရှည်သည်းခံရန်လိုသည်။ သင့်အနေဖြင့်လက်ရှိမဟာဗျူဟာများကိုလေ့လာရန်နှင့်သင်၏ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုများကိုဖွံ့ဖြိုးရန်ကြိုးစားရမည်။ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့ချရန်အတွက်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များလည်းရှိသည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေစဉ်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုသည်နည်းဗျူဟာရုန်းကန်မှုအပြင် သင်တိုတောင်းသောကာလ၌သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ဟုထင်ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်လွှဲကုန်သည်များသည်အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရန်အတွက်မျိုးစုံပိုင်ဆိုင်မှုများစွာကိုအမြောက်အများရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ သငျသညျဆုံးရှုံးမှုရင်ဆိုင်ရလျှင်နောက်ဆက်တွဲ, ထိုအရာ၏သိသိသာသာဘက်မှာနိုင်ပါတယ်။
သင်၏နောက်လာမည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခု၏ရလဒ်များကိုရှောင်ရှားရန်ကိုလည်းကုန်သည်များကအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ဤသည်မှာနည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်ကစားရာနေရာဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အားပုံစံများကိုခွဲခြားသိမြင်စေပြီးသင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အညီပြုမူဆောင်ရွက်စေသည်။ များစွာသောကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များကသင့်အားဤအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဤလမ်းညွှန်တွင်ကုန်သွယ်မှုပြုရန်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပွဲစားများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြင်တွင်ဆွေးနွေးပါမည်။
Swing Trading တွင်အမှာစာအမျိုးအစား
ယခုအချိန်အထိမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးတွင်မဆိုအရေးအပါဆုံးရာထူးနှစ်ခုဖြစ်သော ၀ ယ်ယူမှုနှင့်ရောင်းဝယ်မှုအမိန့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်ဤအမိန့်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးသည်လုံလောက်နိုင်သည် သေးငယ်သော စျေးကွက်အတွင်းအပြောင်းအလဲများသည်ကုန်သည်များ၏ရေရှည်အမြတ်အစွန်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်တိုတောင်းသောကာလကုန်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်လျှင်သင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်ကိုစိတ်ကူးမပါဘဲအမှာစာကိုဖွင့်ထားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထိုသို့ပြုရာတွင်၎င်းကိုမဆင်မခြင်ကုန်သွယ်မှုဟုရည်ညွှန်းလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်ကုန်သည်တိုင်းသည်ထွက်ပေါက်အစီအစဉ်လိုအပ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအမြတ်တိုးပွားရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ရန်အမြတ်အစွန်းကိုအမြဲတမ်းစောင့်ဆိုင်းနေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည်၊ လွှဲကုန်သည်များသည်အချိန်တိုအတွင်းကုန်သွယ်မှုမျိုးစုံကိုကိုင်တွယ်ကြလိမ့်မည်။
အရှုံးကန့်သတ်ရန် Stop-Loss အမိန့်
နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းဤအမိန့်သည်ကုန်သွယ်မှု၌သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကန့်သတ်ရန်ကူညီသည်။ ဒါဟာပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းရောက်ရှိတစ်ချိန်ကသင်၏ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ဖို့ရန်အမိန့်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ABC ၏ရှယ်ယာတစ်စုလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်သင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုအပြီးတွင်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးလျော့လာသည်။
ဤကိစ္စတွင်, သင် $ 48 မှာ stop-loss အမိန့်ထားရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ABC ၏အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးများစတင်ကျဆင်းလာချိန်တွင်သင်၏ ၄၈ ဒေါ်လာအမှတ်အသားသို့ရောက်သောအခါသင်၏ရှယ်ယာများကိုရောင်းချလိမ့်မည်။ မည်မျှအထိကျဆင်းသွားသည်ဖြစ်စေရှယ်ယာတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၂ ဒေါ်လာသာဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
များသောအားဖြင့်ဤရပ်တန့်မှုဆုံးရှုံးမှုအမိန့်များကိုရာခိုင်နှုန်းအတိုင်းအတာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ ပစ္စည်းသည်ပြောခြင်း၊ ၂% သို့မဟုတ် ၃% သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောနှုန်းဖြင့်တန်ဖိုးလျော့သွားပါကသင်ရပ်တန့်နိုင်သောအမိန့်ကိုသတ်မှတ်မည်။
အလားအလာကောင်းတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်။ Stop-loss အမိန့်များသည်အခြေခံအားဖြင့်အာမခံပေါ်လစီအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော်လည်း၎င်းကိုသင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုအမြဲတမ်းအာမခံမထားပါ။ စျေးကွက်အခြေအနေသည်ရောင်းချမှုကိုဤတန်ဖိုးအတိုင်းပြုလုပ်ရန်ခွင့်မပြုပေ။ ယင်းအစားအချို့ပွဲစားများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား“ အာမခံချက်ရှိသော” stop-loss စျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ဤသည်ကပွဲစားသည်မည်သည့်စျေးကွက်နှင့်မဆိုသင်၏အမှာစာကိုဂရုပြုလိမ့်မည်။ ဤအချက်မှအကျိုးခံစားရရန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်လည်းအပိုကြေးပေးဆောင်ရမည်။
သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့ထင်ရသလောက်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရာထူးနေရာများမှားသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များသည်သူတို့၏အမြတ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာ stop-loss ဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုတင်းကျပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းအမြတ်အစွန်းအမိန့်များသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ တိကျသောပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာမှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်အမြတ်အစွန်းနည်းသောစျေးကိုရရှိလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏မည်မျှအထိတက်သွားမည်ကိုခန့်မှန်းလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည် ABC ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်ရှည်လျားစွာသွားခဲ့သည်ဟုဆိုပါစို့။ သငျသညျ $ 50 မှာယူ - အမြတ်အမိန့်ချထားပါ။ အကယ်၍ ABC ၏စျေးနှုန်းသည် ၅၅ ဒေါ်လာသို့ရောက်လျှင်သင်၏ရောင်းရန်အမှာစာကိုကွပ်မျက်လိမ့်မည်။ ဒီနေရာမှာမင်းဟာအမြတ် ၁၀% ကိုပစ်မှတ်ထားနေတယ်။ ၀ ယ်ယူသည့်အမြတ်မှာယူမှုသည် ၅၅ ဒေါ်လာသို့ရောက်ရှိပြီးနောက် ABC ၏ရှယ်ယာများကျဆင်းသွားလျှင်ပင်သင်၏ ၀ င်ငွေသည်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်များချမှတ်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးသင်ကုန်သွယ်မှုမပြုမီသင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုရယူခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏အလားအလာရှိသောဆုံးရှုံးမှုနှင့်အကျိုးအမြတ်များကိုလည်းသင်ရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဤနှုန်းထားများကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဒုတိယခန့်မှန်းခြင်းမှတားဆီးလိမ့်မည်။
Swing ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုထက်ပိုသောနေရာများအတွက်ထိုအချက်အလက်များ၏ကျောထောက်နောက်ခံဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများသည်သတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်များကိုမရောက်နိုင်ပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင်ကုန်သည်ကြီးကသူတို့ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ချင်မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ်။ လွှဲကုန်သွယ်မှုတွင်မည်သည့်ထပ်မံလှုပ်ရှားမှုများကိုမဆိုစောင့်ဆိုင်းရန်သင်အနည်းငယ်ထပ်မံစောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။
Swing Trading ကုန်သွယ်သည့်အခါ Leverage နှင့် Margin
အချိန်တိုအတွင်းကုန်သွယ်မှုမျိုးစုံပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Swing ကုန်သည်များသည်အရင်းအနှီးများစွာရရှိရန်လိုအပ်သည်။ သြဇာကစားသို့ကြွလာဘယ်မှာဒီနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကိုသာအသုံးပြုမည့်အစားသြဇာအပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး ၌သူတို့၏အကောင့်တွင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ သာရှိပြီးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ လိုအပ်သည်ဟုဆိုပါစို့။ သူတို့လိုအပ်သောအရင်းအနှီးကိုရရှိရန် ၁၀ ဆကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။
သြဇာသည်သင်၏အရင်းအနှီးသာမကအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုပါချဲ့ထွင်ကြောင်းသတိရပါ။ လီဗာကို Multi-ခြံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အပေါ် မူတည်၍ သင်ရရှိနိုင်သောသြဇာပမာဏကိုလည်းကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်မှုအမျိုးအစားပေါ်တွင်လည်းမူတည်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ဆုံးရှုံးမှုများကိုရင်ဆိုင်ရပါက၊ ဥပမာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၎င်းသည် ၁၀ ဆတိုးလာလိမ့်မည်ဟူသောအချက်သည်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ အစပြုသူများအနေဖြင့်အပိုအရင်းအနှီးသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုအသုံးချရန်မထွက်ခွာမီတွင်သြဇာသက်ရောက်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုသင်အပြည့်အဝသိရှိထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Swing Trading အတွက်ပွဲစားအခကြေးငွေနှင့်ကော်မရှင်
လွှဲကုန်သွယ်မှုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ဖြစ်ပျက်။ သူတို့လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်ယနေ့, ဒီအရောင်းအများ၏အများစုအွန်လိုင်းပေါ်မှာဖြစ်ပျက်။ မည်သည့်နေရာတွင်သင်ကုန်သွယ်သည်ဖြစ်ပါစေပွဲစားအားပေးရမည့်ပုံမှန်အခကြေးငွေအနည်းငယ်ရှိပါသည်။
အဆိုပါ ပျံ့နှံ့ တစ်ခုတည်းပိုင်ဆိုင်မှု၏ကုန်သွယ်ရာထူးအတွက်ခြားနားချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမည်မျှရောင်းချသည်နှင့်ကွာခြားသည်။ ပွဲစားများသည်သူတို့ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းကိုပြန့်နှံ့စေသည်၊ ၎င်းသည်မည်သည့်လမ်းကိုသွားသည်ဖြစ်စေအမြတ်အစွန်းရရှိစေသည်။
ပြန့်ပွားမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်နားလည်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သင်ဖြည့်စွက်ထားသောကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်အကျိုးအမြတ်အနည်းဆုံးနှင့်ပြန့်ပွားမှုနှင့်တူညီရမည်။ ထိုအချိန်အထိသင်သည်အနီရောင်၌နေလိမ့်မည်။
သင် ABC ရှယ်ယာများကို $50.00 ဖြင့် ဝယ်ယူသည်ဆိုပါစို့။
ABC ရှယ်ယာများကို ရောင်းဈေး $50.50 ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စတွင်၊ ပျံ့နှံ့မှုသည် 1% ဖြစ်သည်။
ဤကုန်သွယ်မှုတွင်အမြတ်အစွန်းရရန်အတွက်၊ ပျံ့နှံ့မှုကိုပေးဆောင်ပြီးနောက်အမြတ်တစ်ခုရရန်အနည်းဆုံးနောက်ထပ် 1% မြင့်တက်ရန် ABC ၏စျေးနှုန်းလိုအပ်သည်။
နှင့်နှိုင်းယှဥ်လျှင် တစ်ရက်ကုန်သွယ်, လွှဲကုန်သွယ်မှုကပြန့်ပွားမှကြွလာသောအခါယေဘုယျအားဖြင့်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွင်ပစ်မှတ်မာဂျင်များသည်လွှဲကုန်သွယ်ခြင်းထက်များစွာသေးငယ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုပြန့်ပွားမှုကများစွာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင်တတ်နိုင်သမျှအမြတ်အစွန်းကိုယူပိုမိုတင်းကျပ်ပြန့်ပွားကမ်းလှမ်း swing ကုန်သွယ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ကော်မရှင်ကိုလည်းရာခိုင်နှုန်းဖြင့်တွက်ချက်သည်။ နောက်ဆုံးငွေပမာဏသည်သင်နှင့်ကုန်သွယ်သည့်အရင်းအနှီးအပေါ်မူတည်သည်။ သင်ကုန်သွယ်ရေး၏နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်ကော်မရှင်ပေးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာဝယ်ယူရေးကော်မရှင်နှင့်အရောင်းကော်မရှင်ရှိလိမ့်မည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း Swing Trading ပလက်ဖောင်း ၅ ခု
မှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းကိုရှာဖွေခြင်းသည်ကုန်သွယ်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်သင်ယူခြင်းကဲ့သို့ပင်အရေးကြီးသည်။ လက်လှမ်းမီသောရာနှင့်ချီ။ ရနိုင်သောရွေးချယ်မှုများနှင့်အစပြုသူများကိုမကြာခဏရှုပ်ထွေးစေသည်။ ထို့ကြောင့်သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နှင့်သင့်တင့်သောအခကြေးငွေပေးရမည့်သတ်မှတ်ချက်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်သွယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးသင့်သည်။ သင်၏အလုပ်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ၂၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံးလွှဲအပ်သည့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်ငါးခုကိုကျွန်ုပ်တို့အမြင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
AvaTrade ကို အသုံးပြု၍ သင်ဤလမ်းညွှန်တွင်ဆွေးနွေးထားသောဘဏ္instrumentsာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများအားလုံးကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။ ၎င်း၏စာရင်းတွင်စတော့ရှယ်ယာများ, Forex, ညွှန်းကိန်း, crypto, ကုန်စည်နှင့် ETFs အဖြစ်ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် options များပါဝင်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည်နှစ်ရှည်လများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်နေရာအဖြစ်နာမည်ရခဲ့သည်။ AVATrade အားကျော်ကြားသောအာဏာပိုင်များမှတိုက်ကြီး ၅ တိုက်တွင်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
Swing trading သည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုရရှိရန်လေ့ကျင့်မှုများစွာလိုအပ်သည်။ အခြားချဉ်းကပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လွှဲကုန်သွယ်မှုသည်မည်မျှအကျိုးရှိသည်ကိုပြောရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်မဟာဗျူဟာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏တိကျသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ရရှိနိုင်သည့်ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးနှင့်အရေးကြီးဆုံး - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်မှုများပေါ်တွင်လည်းမူတည်လိမ့်မည်။
ဤလမ်းညွှန်သည်လွှဲကုန်သွယ်ခြင်း၏အခြေခံများကိုဖော်ပြထားသည်။ သင်စတင်အသုံးမပြုခင်၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သောအခြားနည်းဗျူဟာများနှင့်သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်နည်းပညာများကိုနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ အခြားကုန်သွယ်ရေးချဉ်းကပ်နည်းများနည်းတူ၊ အမြတ်အစွန်းနှစ်ခုလုံးကိုလက်ခံရန်သင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်သည် နှင့် လမ်းတစ်လျှောက်ဆုံးရှုံးမှု။
Swing ကုန်သည်များသည်သူတို့၏ရာထူးများကိုရက်အနည်းငယ်မှရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိပွင့်လင်းစွာထားရှိကြသည်။ ဤအချိန်သည်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအစားနှင့်စျေးကွက်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်။
Swing ကုန်သည်များသည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလများတွင်အကျိုးအမြတ်အနည်းငယ်သာရရှိရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ တစ်ရက်မှတစ်ရက် ၀ င်ငွေမည်မျှရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရေအတွက်နှင့်စျေးကွက်တွင်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်မူတည်သည်။
အဆိုပါပျံ့နှံ့မျှသာလေလံနှင့်ဘဏ္aာရေးတူရိယာ၏တောင်းစျေးနှုန်းအကြားကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင် 'pips' တွင်တွက်ချက်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အမြတ်အစွန်းတွင်အလားတူရာခိုင်နှုန်းကိုသာရရှိရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုအပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းတို့သည်လိုင်စင်ရယူရန်ဆုံးဖြတ်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်နေစဉ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလိုင်စင်အဖွဲ့မှထို site ကိုစောင့်ကြည့်ရန်မှာသင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အပြည့်အဝလိုင်စင်ယူထားသည်။
လွှဲကုန်သွယ်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရက်များ (သို့) ရက်သတ္တပတ်များအထိရာထူးများထားရှိကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်, နေ့ကုန်သည်များတူညီသောနေ့၌ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အနီးကပ်ရာထူး။ အကယ်၍ သင်၏ရာထူးများကိုတစ်ညတည်းထားလိုလျှင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှကောက်ခံသည့်အတိုင်းတစ်ညချင်းငွေကြေးပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။